Nin ka sheekeeyey xaalad adoonsi ee ku qabsatay dalka Libya, isagoo dhowr jeer la iibiyey… – Hagaag.com
Nin ka sheekeeyey xaalad adoonsi ee ku qabsatay dalka Libya, isagoo dhowr jeer la iibiyey…
Posted on 11 Diseembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Migrants rides in a truck before they are transported to a detention center, in the coastal city of Sabratha, Libya, October 7, 2017. Picture taken October 7, 2017. REUTERS/Hani Amara - RC17C6423690
Sanadkii 2015, Yacouba Konate waxaa lagu iibiyay dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa xaalad aad u qalafsan, taas oo ay adagtahay inuu kasoo kabto oo sharaxo tafaasiisheeda. Wuxuu aakhirkii ku dhamaaday isagoo qaxooti ah dalka Faransiiska, halkaas oo uu ka shaqeeyo kuna aasaasay qoys yar.
Warbixin lagu daabacay wargeyska Faransiiska “la Croix”, ayaa qoraa Marie Boyton waxay ku sheegtay in Konate uu leeyahay gabar labo sano jir ah, mana doonayo inay ogaato sheekadiisa; Sababtoo ah “waa wax laga xishoodo in la maqlo aabaheed inuu addoon ahaan loo iibiyey, ama inuu ku hoos jiray hanjabaad joogto ah oo loo adeegsaday Kalashnikov, ama inuu qarka u saaranaa inuu gaajo u dhinto.”
Konate wuxuu addoon ahaan ugu noolaa Liibiya wuxuuna soo arkay nooc kasta oo xanuun ah. “Halkaas ayaad bani-aadminnimada lagaaga qaadayaa,” ayuu yidhi isagoo meel fog eegaya. Dhibaatadii uu ku jiray ​​waxay qaadatay qiyaastii 5 bilood, laga bilaabo Agoosto 2015 ilaa Janaayo 2016; Laakiin sida laga soo xigtay Konate, “waxay socotay muddo 50 sano ah, maxaa yeelay intaas ka dib waxaad fahmi doontaa adduunka gebi ahaanba si ka duwan sidii hore.”
Sannadkii 2015, sida ay sharraxday qoraaga, tahriibiye reer Tunisia ah oo u ballanqaaday inuu u tahriibiyo Yurub 550 euro. Waxay ahayd heshiis soo jiidasho leh; Maadaama Liibiya ay tahay marin dhab ah oo loo maro Talyaaniga. Heshiiska ayaa la dhameystiray, muhaajiriinta ayaa waxaa lagu qaaday gaari xamuul ah oo yar, ka dibna maro yar ayaa la dul saaray madaxooda taasoo inaad neefsato dhib kugu noqoneyso.
Ninkan dhalinyarada ah ee ka soo jeeda Ivory Coast wuxuu dib u xusuustaa in “nimankan si fiican u yaqaanaan lamadegaanka”. Laakiin haddii gawaaridan xamuulka qaada ay marayaan lamadegaanka, si looga baxsado maleeshiyada gaadmada dhabo galka ah. Baabuurta xamuulka noocaani ah ayaa soo jeedata hamiga hogaamiye kooxeedyada maxaliga ah, maadaama muhaajiriinta ay noqdeen “dahabka madow” ee cusub oo deegaanka ka jira.
Kadib markuu xadka ka talaabay, Konate waxaa lagu dhex tuuray bakhaar yar oo ay weheliyaan 87 saaxiibbadiis ah, ayuu qoraagu ku daray. Wuxuu leeyahay meeshu waxay ahayd “gabal dhul qiyaastii ah 12 mitir laba jibbaaran. Waxaanu aheyn 88 qof, qolkuna wuxuu ahaa 6 mitir dherer ah iyo 2 mitir oo balac ah, una dhiganta 8dii qofba hal mitir laba jibbaaran.”
Dhibaatadaasi waxay qaadatay dhowr maalmood, Konate wuxuu yiri, “Markii aan ka soo baxnay goobta oo aan ogaanay in midkeen uu dhintay, dadka qaar ayaa ka soo baxay halkaasi iyaga oo aan socon karin. Nasiib wanaag waxaan awooday inaan adkeysto oo aan xoog isu yeelo, oo aan ka gudbo dhibaatadan.”
“Markii aan nimid, tahriibiyeyaashu waxay nagala wareegeen wax walba si ay u hubiyaan inaanan wax lacag ah noo harin. Waxay naga wada dhigeen dhamaanteen dharkii halkaasi waxaan ku noqonay dad qaawan waxayna nagu amreen inaan fadhiisano oo aan qufacno si ay u hubiyaan in aan wax lacag ah ku heysano gudaha futada,” ayuu raaciyay. Waxay kaloo ay adeegsadeen in ay u hanjabaan qoysaska, halkaas oo tahriibiyeyaashu ka codsadaan muhaajiriinta inay u wacaan eheladooda si ay uga helaan madax furasho, dhawr boqol, iyo mararka qaarkoodna dhawr kun oo euro, si ay u sii daayaan.
Iibinta jumlada ama tafaariiqda
Qoraagu waxay sheegtay in qeybta xigta safarka Konate uu la socday “madax qoys” oo ku sugan gobolka Sabratha (waqooyi-galbeed ee dalka). Mar kale wuxuu waxba ka ogeyn lacagta lagu iibsaday. “iibka ayuu ahaa mid jumlo ah. Waxaanu aheyn ku dhowaad 10 qof oo loo soo qadimay beec waqtigaas.”
Wuxuu galay guri qurux badan oo markii hore ka yaabiyay; Laakin, daqiiqado yar ka dib, wuxuu xaqiiqsaday in qaybtiisa ay noqon doonto keliya garaash uu la wadaago dadka kale ee murugaysan oo sidiisa oo kale la soo iibsaday. Kooxdu way ogtahay inay khasab ku tahay inay dadaal dheer u galaan sidii ay dib ula soo noqon lahaayeen xorriyadooda. Waxaa loo sheegay inay tahay inay “dib isu iibsadaan”. Cunto maalmeedkoodu wuxuu ahaa caga juglayn iyo sharaf dhac. Konate waqtiga intiisa badan wuxuu ka shaqeeyaa beeraha iyadoo ay jirto cabsi joogto ah oo uga imaaneysa qoriga Kalashnikov. Maalmaha qaar, isaga iyo saaxiibbadiis waxaa ilaaliya carruur yaryar oo hubaysan, sidoo kale.
Cunnooyinka la siiyo ee ugu waaweyn waxay ahaayeen rooti, ​​biyo, caano, iyo buskud qalalan, marka nasiibku u dhoolla caddeeyana, waxay helaan malaayga sardine ee qasacadaysan.
Konate mar kale ayaa lagu beddelay qof ilaa qof kale, illaa uu markii dambe ku dambeeyey xarun qarsoodi ah oo xabsi ah, halkaas oo noloshiisu ahayd mid cabsi leh. “Halkaas, ilaaladu ma shaqeeyaan fasaxyada isbuuca, waxaan ku jirnay xaalad ah in 72 saacadood oo aan wax cunin.” Qaar baa kaadidooda cabay.
Dhamaadkii 2015, qoraaga ayaa tilmaamtay in la sii daayay Konate. Waa wax aan macquul aheyn in la ogaado sababta waqtigan gaarka ah loo doortay.
Intaas kadib, Konate wuxuu awooday inuu gaaro Yurub. Wuxuu yimid Sicily bishii Janaayo 2016, ka dibna wuxuu ku guuleystey inuu u safro Faransiiska isagoo gacan ka helaya koox mutadawiciin ah oo wax u qabta dadka aan la aqoon, wuxuu degay Savigny-le-Temple oo ku taal Paris, waxaana la siiyay magangalyo.